ဆောင်းပါးများ | Page 2
The Importance of Metta in Modern Society
Metta is rendered as loving-kindness; it isapure state of love with no any sensual desires. It has the sense of wanting other’s benefits in one way or another. So it isakind of love,agenuine desire for the welfare of all beings. “It is pure love and pure desire for all beings, including ourselves”. It […]
ဒီသုတ္တန်ဟာ မဇ္ဈိမပဏ္ဏာသပါဠိ၊ ဗြာဟ္မဏ၀ဂ်မှာ ရှိပါတယ်။ သုတ္တန်ဇာတ်ကြောင်းကတော့ ရိုးရိုးလေးပါပဲ။ သို့သော်လည်း တန်ဖိုးရှိတဲ့ message တွေ အများကြီး ပါဝင်နေတာကို ဖတ်ကြည့်ရင် တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး ရာဇဂြိုဟ်ပြည် ဝေဠုဝန်ကျောင်းတော်တွင် သီတင်းသုံးတော်မူစဉ် အချိန်တစ်ချိန်က ဖြစ်ရပ်လေးတစ်ခုပါ။ အဲဒီတုန်းက အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရ်မြတ်ဟာ ရာဇဂြိုဟ်မြို့ရဲ့ တောင်ဘက်အရပ်မှာ သီတင်းသုံး ၀ါကပ်တော်မူနေပါတယ်။ တစ်နေ့ ၀ါကျွတ်တဲ့အချိန်မှာ ရာဇဂြိုဟ်က ရဟန်းတော်တစ်ပါးက ဒေသစာရီကြွချီရင်း အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရ်မြတ်ကြီးထံ ၀င်ရောက်ဖူးမြော်ပါတယ်။ ထိုအခါ အရှင်သာရိပုတ္တရာက ရောက်လာတဲ့ ရဟန်းတော်ကို သာကြောင်း မာကြောင်း မေးမြန်းပြီး `ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရော ခန့်ကျန်းသာလို့ မာပါရဲ့လားဘုရား၊ ရဟန်းသံဃာတော်တွေရော ခန့်ကျန်းသာလို့ မာပါရဲ့လားဘုရား´လို့ မေးတော်မူလို့ ရဟန်းတော်လေးကလည်း အားလုံး ခန့်ကျန်းသာ မာကြောင်း ပြန်လည်လျှောက်ထားပါတယ်။ ရာဇဂြိုဟ်မြို့ရဲ့ တံခါးပေါက်ကြီး (၃၂)ပေါက်၊ တံခါးပေါက်ငယ် (၆၄)ပေါက်ရှိရာ တံခါးပေါက်တစ်ပေါက်ရဲ့ အမည်က […]
Important Points for Insight Meditation Practice There are some important points to develop insight meditation practice, “vipassanæ,”for the development of mental culture from the Buddhist points of view. The first important point is morality. The second important point involves the study of Paramatthadhamma, of the ultimate realities, different mind and matter processes and characteristics, different consciousness and different mental […]
ရှေးယခင်က ဗာရာဏသီပြည် ယသပါဏိမင်းကြီး စိုးစံတော်မူနေတဲ့အချိန် ဘုရားလောင်းက ဓမ္မဓဇအမည်ရှိတဲ့ ပုရောဟိတ်ကြီးဖြစ်ပြီး ဆတ္တပါဏိက ဆတ္တာသည်၊ စစ်သူကြီးက ကာဠကအမည်ရှိသတဲ့။ ကာဠကစစ်သူကြီးက တရားစီရင်ဆုံးဖြတ်ရာ၌ တာဝန်ယူလျက် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူလုပ်ကာ များများပေးနိုင်သူကို အနိုင်၊ မပေးနိုင်သူကို မှန်သည်ဖြစ်စေ မှားသည်ဖြစ်စေ ရှုံးအောင် ဆုံးဖြတ်ပေးပါတယ်။ အမှန်တရားပျောက်၊ ငွေနောက်လိုက်ကာ မမှန်သူတွေ ကောင်းစား အမှားတွေ မှန်နေတဲ့ ခေတ်ဆိုးကြီး ကြုံနေရတဲ့အခါ ကောက်ကျစ်စဉ်းလဲသူတို့ ခေါင်းထောင်ပလွှား ၀ါကြွားနိုင်ကြပြီး အမှန်တရား မြတ်နိုးသူတို့ ခေါင်းငုံ့ အရှုံးပေးနေကြရရှာတယ်။ ဥပဒေလက်တစ်လုံးကြားလုပ်ပြီး ညစ်တဲ့သူနိုင်စေ၊ မှန်သူတွေ ရှုံးစေဆုံးဖြတ်ချက်တွေချည်း နေ့စဉ်ချမှတ်နေလေရာ တရားရုံးတော်က အထွက် စောင့်ကြည့်လိုက်လျှင် မှန်လျက်နဲ့ တရားရှုံးသွားကြလို့ မျက်ရည်စက်လက် ငိုထွက်လာကြတဲ့ သူတွေအများကြီးတွေ့နေရတယ်။ လူညစ်တို့အုပ်စုကတော့ ပြုံးလို့ ပျော်လို့ မော်လို့ ကြွားလို့။ မကောင်းတဲ့သူတွေ အာဏာရနေချိန်မှာ ပေါင်းစားသူတွေ ကောင်းစားနေတာ သဘာဝပါပဲ။ […]
ဗာရာဏသီပြည် ဗြဟ္မဒတ်မင်းကြီး ထီးနန်းအုပ်ချုပ် မင်းလုပ်နေစဉ်အချိန်က ဘုရားအလောင်းတော်ဟာ သူဋ္ဌေးမျိုးမှာ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ မိဘများကွယ်လွန်ပြီးနောက် သူဋ္ဌေးအရိုက်အရာကို ဆက်ခံရပါတယ်။ မိဘအမွေအနှစ်အဖြစ် စီးစိမ်ဥစ္စာ ကုဋေ (၄၀) ချမ်းသာကြွယ်ဝပါသတဲ့။ ဘုရားလောင်း၌ တစ်ဦးတည်းသော သားလေး ရှိပါတယ်။ ဘုရားလောင်းသူဋ္ဌေးဟာ ဒါနပြု၊ သီလဆောက်တည်၊ ကြီးသူတို့ကို ရိုသေခြင်း စသောကေင်းမှုမျိုးစုံပြုလျက် သက်တမ်းစေ့သဖြင့် သေဆုံးကာ နတ်ပြည်၌ သိကြားမင်းကြီးဖြစ်သွားတယ်တဲ့။ ဖခင်သူဋ္ဌေးကွယ်လွန်သွားသောအခါ တစ်ဦးတည်းသော သူဋ္ဌေးသားသည် သူဋ္ဌေးရာထူးဆက်ခံကာ သူဋ္ဌေးဖြစ်ချိန်မှစ၍ သူ့အိမ်ရှေ့ လမ်းမကြီးကိုပိတ်လျက် မဏ္ဍပ်ကြီးဆောက်လုပ်ပြီး ပရိသတ် အခြံအရံများစွာ ဖိတ်ကြားလျက် သေရည်အရက်သောက်ပွဲကြီးကျင်းပပါတယ်။ အရက်သောက်ပွဲတွင် ဖျော်ဖြေရေးအဖွဲ့မျိုးစုံလာရောက် ဖျော်ဖြေကြလျက်ရှိရာ သူသဘောကျသည့်သူကို အသဖြာ ဒင်္ဂါးပြား (၁၀၀၀)စီဆုချလေ့ရှိတယ်။ ဂျွမ်းဘားသမားကို သဘောကျလျှင် (၁၀၀၀)၊ အဆိုတော်ကိုသဘောကျလျှင်လည်း (၁၀၀၀)၊ အကသဘောကျလျှင်လည်း (၁၀၀၀)၊ အပြေးသမားသဘောကျလျှင်လည်း (၁၀၀၀) စသည်ဖြင့် ဆုချလိုက်ပြီဆိုလျှင် […]
ဗုဒ္ဓလက်ထက်တော်အခါက ဗုဒ္ဓနှင့်ခေတ်ပြိုင် တိတ္ထိဆရာကြီး ခြောက်ယောက် ပေါ်ပေါက်ခဲ့ဘူး၏။ ဗုဒ္ဓနှင့်ခေတ်ပြိုင်ဟု ဆိုရသော်လည်း ယင်းတို့သည် ဗုဒ္ဓ၏အရင်ကပင် ကြိုတင်၍ ဘုရားဟု ၀န်ခံလျက် လူသူပရိသတ်အများခြံရံကျော်ဇောလျက် ရှိနေကြသူများဖြစ်၏။ ဗုဒ္ဓမပွင့်ပေါ်မီကာလ အစောပိုင်းကတည်းက လောကမှာ ဘုရားပွင့်မည်ဟု ကောလဟလများထွက်ပေါ်လျက်ရှိနေသဖြင့် ယင်းကောလဟလများ နောက်ခံထားလျက် ဘုရားအဖြစ် ၀န်ခံကာ ဟောပြောပို့ချ အယူဝါဒတို့ကို ဖြန့်ချိနေကြသူများဖြစ်၏။ ယင်းခြောက်ယောက်တို့မှာ ပူရဏကဿပ၊ မက္ခလိဂေါသာလ၊ အဇိတကေသကမ္ဗလ၊ ပကုဓကစ္စာယန၊ နိဂဏ္ဍနာဋပုတ္တ၊ သဉ္စယဗေလဋ္ဌပုတ္တ တို့ဖြစ်ကြ၏။ ဘုရားမပွင့်မီကာလက ဗုဒ္ဓဂုဏ် တစ်စုံတစ်ရာ မရှိပါဘဲလျက် ဘုရားဟု ၀န်ခံလျက် ဘုရားတုလုပ်နေကြသူများပင် ဖြစ်ပါ၏။ ထိုဘုရားတုတို့ ဟောပြောသမျှသည်လည်း တရားတုများသာ ဖြစ်ပါ၏။ ထိုဘုရားတုတို့၏ တပည့်သာဝကအဆက်ဆက်တို့သည်လည်း သံဃာတုတို့သာ ဖြစ်ပါ၏။ မှန်ပါ၏။ အစစ်အမှန်နှင့် အတုအပတို့မည်သည် လောက၌ ဒွန်တွဲလျက်ရှိရိုးဖြစ်၏။ အစစ်ပေါ်ပြီးမှ အတုပေါ်သည်လည်း ရှိတတ်၏။ အစစ်မပေါ်မီ အတုပေါ်သည်လည်း […]
ဗုဒ္ဓတရားတော်များသည် စိတ်ယဉ်ကျေးမှုအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေသည်သာမက စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ငြိမ်းအေးမှုကိုပါ ပေးစွမ်းနိုင်ပါ၏။ ကိုယ်ကာယဆိုင်ရာ ယဉ်ကျေးမှု သိမ်မွေ့မှုအတွက်မူ ပြောစရာပင် မလိုတော့ပေ။ လူသားနှင့် သတ္တ၀ါအားလုံးတို့ ရင်ဆိုင်နေကြရသည်မှာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပင်ပန်းမှု၊ နွမ်းနယ်မှု၊ မသက်မသာဖြစ်မှု၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှု၊ ၀မ်းနဲကြေကွဲမှုစသည်ဖြင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အခက်အခဲများ- နေ့စဉ်ဘ၀မှာ မကျော်နိုင်မလွှားနိုင် ရင်ဆိုင်နေကြရလေသည်။ ယင်းစိတ်ခံစားမှုများသည် အကောင်း အဆိုး ဒွန်တွဲလျက်ရှိနေပေရာ အကောင်းဘက်၌ ပြဿနာဟု ဆိုဖွယ်ရာ မရှိလှသော်လည်း အဆိုးနှင့်တွေ့ကြုံလာရလျှင်မူ ပင်ပန်းဆင်းရဲစွာဖြင့် ယောက်ယက်ခတ် ပျာယာခတ် မနေတတ်မထိုင်တတ် စားမ၀င် အိပ်မပျော်လောက်အောင်အထိ ဖြစ်လေ့ရှိကြသည်။ ယင်းပူလောင်စူးရှခါးသက်လှသည့် စိတ်အနာတရ အပူဓာတ်တွေလျော့ကျရေးအတွက် အိုဇုန်းလွှာပေါက်၍ အပူလှိုင်းများကျရောက်မှုကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် Global-warming အကြောင်း အဖြေရှာဆွေးနွေးခြင်းဖြင့်လည်း စိတ်အပူဓာတ်လျော့ကျနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ သို့သော် အဖြေက ဗုဒ္ဓရှင်တော် ဖော်ထုတ်ထားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါ၏။ ယင်းအဖြေရလတ်တွေကို အကောင်အထည် မဖော်ဆောင်နိုင်ခြင်းသည်သာ အဓိကပြဿနာတစ်ရပ် ဖြစ်နေသည်ကို […]